म्युजिकल फिल्म ‘आमा कहाँ खोजुँ ?’ को ट्रेलर सार्वजनिक - MusicKhabar.com: Nepal's No. 1 Musical Newspaper
एक दिन अचानक, आफु सानो छदाँ खोलाको किनारमा छोडेर भागेको सपना देख्छे, व्युँझिन्छे । उनलाई अझ बेशी आमाको आवश्यक्ता महशुश गर्छे । आमाको खोजि गर्छे । यसमा छोरीको धारणाबाट, छोरीले कथालाई प्रस्तुत गरेको छ ।
‘आमा कहाँ खोजुँ ? नेपाली समाजमा देखिने हजारौ निर्दोष र अबोध अनाथ बालबालिकाहरुको कथा हो ।
राज्यको नीतिले एकल पहिलामा कानुन असहज हुनुको पछाडी केही हद सम्म राज्य पनि दोषी हो कि ? भन्ने प्रश्न फिल्मले पैदा गर्छ । फिल्ममा अशोक थापा मगरको संगीत र शब्द रहेको छ । फिल्मको गीतलाई गिताञ्जली थापा मगरले गाएकी छन् । संगीतमा राजु थापा मगर पनि आवद्ध छन् । दीपक बज्राचार्यले खिचेको फिल्मलाई अशोक थापा मगरले नै निर्देशन गरेका छन् । फिल्मका निर्माता टेक बहादुर थापा र राजु थापा हुन् ।